XASAASI: Go’aan aan la Fileeyn & waxa Ka jira Is Casilaada Gud Jawaari? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 9 April 2018
Muqdisho ( mareeg news ) Saaka waabarigii hore markii xarunta latagay ayaaa waxaa golaha warqad kahor aqriyay muudey oo sheegay in jawaari iyo cawad iscasileen ,warqaadaa waxaa ku qornaa in gudoomiye jawaari tanaasulay islamarkaana uu golaha hor imaan doono maalinka arbacada ah.
sida uu sheegay muudey,islamarkaana qudbada iscasilaadiisa uu jeedin doono ,intaas markii uu sheegay ayaa lagu kala dareeray goobta .
Warkaas been iyo run labadaba waa noqon karaa waayo ilaa hada lama haayo cadeyn dhinaca gudoomiyaha ah ,maalinka arbacada ayay qabsadeen in gudoomiyuhu iscasilaad ku dhawaaqayo lakiin waxaa macquul ah iney isbadasho sheekadu laakiin aan kawar sugno xaalka run iyo been.
Jawaari hadii uu baxo maxaa dhacaya?
Xukuumadu waxa ay maanka ku heysaaa iney keensadaan qof kale lakiin sida ay wax u filayaaan wax uma fududa waayo 70%kiiba barlamanku waaa ka soo horjeedaan xukuumada oo siyaasad ahaaan iyo aragti ahaanba la isma ogola.
marka waxaa adkaan doonta qofka ay rabaan iney keeensadaan waxaana ka horeeya siyaasad adag iyo daal farabadan.
Aan sugno jawaabta dhinaca kale.
TOP: Yaa ku Qanciyay Inuu Is Casilo Gud Jawaari? & Waxa laga Filan karo intuu Aamusanyahay.